कहिले सकिएला यो जाडो??? – पुरु's कर्नर
Home » Old Blog » कहिले सकिएला यो जाडो???
कहिले सकिएला यो जाडो???
By Purushottam Adhikari 01, 14, 2013
बिहान साढे छ को अल्राम थियो, कलेज जान रेडी हुनु पर्ने थियो साढे सात बजे। अल्राम बज्यो समयमै, उफ कति चाडो बजेको यो पनि, अफ गरिदिए, सिरकमा न्यानो भैरहेको थियो, एकछिन पल्टीउ न त भनेर कोल्टे परियो। झल्यास विउझियो, लौ फसाद साढे सात त भैसकेछ। हतार हतार गरेर ड्रेस सम्म लाउन भ्याइयो, ब्रेकफास्ट त छुटीहाल्यो। आज भोकै परियो भनेर सोच्दा सोच्दै कलेज पुगियो। कलेजमा पनि जाडोले मन बहकाईरह्यो, यो जाडोले मेरो पुरै दीनचर्या अस्तव्यस्त बनाएको छ। मलाई होस्टेलमा प्राय सबैले चाडो उठ्नेको सूचीमा राख्छन। तर यो जाडोमा चाडो उठ्नु एउटा ठुलै युद्ध जितेसरी हुने गरेको छ।
साँच्चै जाडो निकै बढेको छ आजभोलि। हुन त मध्य पुस र माघ मा जाडो हुनु कुनै अनौठी कुरा होइन। समाचारको हेडलाइन देखि फेसबुक ट्वीटर चारैतिर यहि जाडो छाएको छ र थोरै बढेको जाडोलाई यसले झन बढाएको छ। जाडो बढ्नुको एउटा कारण यो देशको माहोलले गर्दा नी होला, प्राय गरमागरम भइरहने राजनीती पनि अहिले सेलाएको छ। केहि छिटपुट घटनाक्रम ले माहोल तताउन कोसिश गरे पनि त्यो फिक्का भैरहेकोछ। बेकारको सरकार र यो देशलाई दलदलमा राख्ने राजनैतीक दलहरुलाई पनि यो जाडोले नराम्ररी गाँजेको छ, दुवै सिरक ओडेर चिर निन्द्रामा छन, जतिनै घच्घच्याए पनि उठनेवाला छैनन।
यो जाडोको फाइदाहरु निकै छन। गुड्डी हाक्नेहरुको लागि गफ गर्ने एउटा राम्रो मेसो भएको छ यो। बेईलमे सरकारी कर्मचारीहरुको टेबल देखि चिया पसलसम्म चारैतिर राम्रो स्थान पाएको छ यसले। जाडो त हो भनेर बिहान घाम टाउको माथी आइपुग्ने बेलासम्म फ्वा फ्वा गर्दै सुत्नलाई बहाना मिलेको छ। मौसम बिभागकाहरु पनि बीजी भाकाछन। खाना पनि पचेकै छ। चिया र चुरोट का पारखीहरुको तलतल मेटाउन पनि यो जाडोले थप बल थपेको छ। मौसमको च्यालेन्ज सँग भिड्नेहरुको लागि र सोमरस मा रसिन र कसिन चाहनेहरुको लागि त सुनमा सुगन्ध थपेको छ यो जाडोले।
तर पनि यो जाडो किन हो किन मलाइ भने मन पर्दैन। बिनासित्तीको बल्छी थापेर हामीलाई अल्छी बनाएको छ यो जाडोले। खान र एकसरो लुगा लगाउन संघर्स गर्नेहरुको लागि यो जाडो आखाको कसिंगर बन्ने गरेको छ। बच्चा र बुढाहरुको लागि अभिसाप बन्ने गरेको छ यो निर्दयी जाडो। अभिनेता र नेता कलाकारदेखि पत्रकारसम्म कोहि अछुतो छैन यो जाडो बाट। यो माघको ठण्डी भनेर मण्डी ओढ्दै चण्डी भट्याउने भालादमी बाहुनको कुरा त भैरव अर्यालले गरेका नै थिए।
तर बेलामौकामा घाडो बन्ने गरेको यो जाडो, चाडो चाडो सकिए कति रमाइलो हुन्थ्यो हगी!! 🙂
Post Tagged with cold, experience, weather